Gniap – Page3– Personal Blog
print("Welcome to my Personal Blog")
မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း (ဧပြီ ၄ ရက်)
မနက် ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်။ မိုးတွေ ရုတ်တရက် ထရွာ ။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း နိမိတ်လားလို့ ခံစားလိုက်ရလို့ ဒီစာ ရေးဖြစ်တာ။ အကြမ်းဖက် အုပ်စုကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၀၀ ကျော်နေခဲ့ပီ။ အင်တာနက်တွေက ညပိုင်းတွေ ပိတ်တဲ့အပြင် ပီးခဲ့တဲ့ ရက်ကမှ Wifi Broadband Device တွေကိုပါ တနိုင်ငံလုံး ပိတ်လိုက်ကြတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ sms တွေနဲ့ နေ့စဥ်သတင်းပို့ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။
April 3, 2021	5:56 pm
မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း(မတ်လ ၂၁ရက်နေ့)
ကြည့်ဖူးတဲ့ လူရိုင်းဇာတ်ကားတစ်ကား မှာ ပါတဲ့ စကားပြောခန်းတစ်ခု လို ကြောက်စိတ်ဆိုတာ ရောဂါ လိုပဲ ။ ကူးစက်လွယ်တယ်။ ဒီတော့ ငါ့သား . ကြောက်စိတ် ရောဂါဆိုးကို ငါတို့ရွာထဲ သယ်မလာခဲ့ပါနဲ့။ အကယ်၍ ဒီတိုက်ပွဲသာ မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ရှုံးသွားခဲ့ရင် ဒါက ကြောက်စိတ် အရင်းခံကြောင့်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူပီပီ ကိုယ့်အသက်သေမှာ ကြောက်တယ်။ ကိုယ့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရမှာ ကြောက်တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများလေလေ – အကြောက်တရား
March 21, 2021	5:08 pm
မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း (မတ်လ ၁၅ရက်နေ့)
ဖုန်းမော်နေ့ (မတ်လ ၁၃) + မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ၂ ရက်ထဲနဲ့ကို လူရာဂဏန်းနီးပါး ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ၁၃ ရက်နေ့ – မန္တလေး အထိနာ။ ၁၄ ရက်နေ့ – လှိုင်သာယာ၊သင်္ကန်းကျွန်း၊ရွှေပြည်သာ။ ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေ၊မိခင်တွေ၊တဦးတည်းသော သား၊သမီးတွေ၊မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေသူတွေ၊တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကျဆုံးမှုတွေမြင်တိုင်း ကိုယ့်မှာ အပြစ်မကင်းသလို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားရတယ်။ သူရဲကောင်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ရင် ဒီနိုင်ငံအတွက် ငါ ဘာပြန်လုပ်ပေးပီးပီလဲ ဆိုတဲ့ အတွေး
March 15, 2021	5:14 pm
မလွတ်မြောက်ခြင်းမှတ်တမ်း (မတ်လ ၇ ရက်)
စာမရေးဖြစ်ဘူး။ သတင်းဆိုးတွေ၊အိပ်မက်ဆိုးတွေကြား တနေ့တာမှာ ဘာမှကို ပြန်မတွေးချင်တော့တာလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ဒါတောင် ကျနော်တို့က တစ်လကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာလဲ အကင်းပဲ ရှိဦးမယ်။ နှစ်ရှည်လများ စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ အခြေအနေဆိုးလိမ့်မလဲ? တိုင်းရင်းသား လို့ ပြဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာ အတိအလင်းပြောထားတဲ့ လူတွေကိုတောင် နှိပ်စက်တယ် ဆိုရင် စာရင်းထဲမပါသေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်လောက်များတောင် ရမ်းကားနှိပ်စက်ပါတော့မလဲ? လူ-လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ လို့ နေ့စဥ်မေတ္တာပို့မှာ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာမှ
March 7, 2021	4:31 pm
မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း(၂၈ ရက်နေ့)
ဒီနေ့က နှစ်ငါးလုံး ရက်ပီးရင် ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်ပုံစံ ထပ်ဖြစ်တဲ့ ရက်။ Milk Tea Alliance – အစပိုင်း ကြားတာ နိုင်ငံ(၄) နိုင်ငံ ၊ နောက်ပိုင်းတော့ (၇) နိုင်ငံ လို့ ပြောကြတယ် – တပြိုင်နက်ထဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြမယ်ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဆိုတော့ လမ်းမပေါ်ကို တက်တက်ကြွကြွပြန်တက်လာကြတယ်။ မနေ့ကတော့ မုံရွာ မှာ ပထမဆုံးပြည်သူ့အသက် ပေးလိုက်ရတယ်။ မုံရွာသပိတ်ကိုလဲ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပီး
February 28, 2021	9:18 am
မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း(၂၄ ရက်နေ့)
ရှေ့ (၂) ရက်က စာမရေးဖြစ်ဘူး။ အပြီးသတ်ရမယ့်အလုပ်တွေ ရယ် ၊ ညကင်းစောင့်ရတဲ့ ရက်ရယ် ဖြစ်နေလို့။ နှစ်ငါးလုံး(၂၂၂၂၂) ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူ သန်းနဲ့ချီပီး လမ်းမပေါ်ထွက်လာကြတယ်လို့ သတင်းစာတွေက ရေးကြတယ်။ နေပြည်တော်မှာ လူရာနဲ့ချီပီး အဲဒီနေ့မှာပဲ အဖမ်းခံရတယ်။ Facebook friend ဖြစ်နေတဲ့ UCSM က မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင် ပါသွားသေးတယ်။ ပြန်လွတ်လာပီလို့ ဒီနေ့ စတေးတပ်ဖတ်လိုက်ရပေမယ့် ဆိုင်ကယ်တွေ ဖုန်းတွေတော့ ပြန်မရသေးဘူးတဲ့။ စစ်တပ်ဘက်ကတော့
February 24, 2021	5:27 pm